အမေရိကန်မှာ LGBT ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်…..😱😱😱 – သတင်းစုံ
အမေရိကန်မှာ LGBT ဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်…..😱😱😱
Mister တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ မင်းသားချော ဥက္ကာမင်းမောင်က LGBT တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကာမင်းမောင်က လက်ရှိမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Arizona ပြည်နယ်၊ Phoenix မြို့မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ဥက္ကာမင်းမောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့တာ (၁၀) နှစ်တိတိ ပြည့်တဲ့နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကာမင်းမောင်က အမေရိကားမှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်တာ အမှတ်တရတွေကို အခုလို့ပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“Today is the 10 year mark in the US. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတာ ဒီနေ့ဆို ၁၀နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ ၃ ပုံတပုံနီးပါးလို့တောင်ပြောလို့ရမယ်။ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါင်းများစွာ၊ ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေ ပျော်စရာ အမှတ်တရတွေ၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ၊ ဘဝအတွေ့အကြုံ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေ များစွာကြုံခဲ့ရပြီးပြီ။”
“ငယ်ငယ်တုန်းက ကြီးလာရင် ဒီနိုင်ငံဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယအိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တခါမှ မတွေးမိခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီကိုလာဖို့ ပညာတွေသင်ဖို့ အစစအရာရာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မေကြီးနဲ့ ဖေကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်သာ ဘဝဟာ အရာရာ တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က နဲနဲမောက်မာတယ်။ ဆိုးတယ်။ အလိုလိုက်ခံရတော့ တခါတရံရိုင်းတယ်။”
“ဒီရောက်တော့မှ ဘဝဟာ အောက်ခြေသိမ်းကအစလုပ်ခဲ့ရတော့ အပိုးကျိုးသွားတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာမခွဲပဲ လူတန်းစားပေါင်းစုံ လူမျိူးပေါင်းစုံကို တန်းတူညီတူ ဆက်ဆံတတ်လာတယ်။ အလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်ခဲ့ဖူးသလို လူပေါင်းစုံနဲ့ ပေါင်းသင်းတတ်လာတယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။ မရိုင်းတတ်တော့ဘူး။ ပိုက်ဆံတန်ဖိုးပိုသိလာတယ်။”
“လိင်တူခြင်းစုံမက်တာဟာလဲ ရှက်စရာမဟုတ်တာ။ အမှားတခုကျူးလွန်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပိုနားလည်လာတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ LGBT တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ သာမာန်ပါပဲ။ သူတို့အတွက် ရပ်တည်ပေးသော တရားဥပဒေတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် ပိုပြီး အမြင်ကျယ်လာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ယုံကြည်မှူပိုရှိလာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကတော့ အရမ်းကြီးဖုန်းကွယ်မထားခဲ့ပေမယ့် အသိခံရမှာတော့ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်လေ။”
“ဒီမှာနေတဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ရည်းစားတွေလဲ အများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဟဲဟဲ.. ဒါကတော့ခြွင်းချက်ပေါ့နော်။ အိမ်ထောင်ကျတယ်။ သူဆုံးသွားတယ်။ မုဆိုးဖိုဖြစ်ဖို့ကံဇာတာပါလာတယ်။ အတိတ်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော့်ဘဝမှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာ ရုပ်ရှင်တကားထက်ပိုပြီးရှူပ်ထွေးလေးနက်တယ်။”
“အဲ့အကြောင်းတွေကို မခွန်းဆင့်က ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ ရေးနေတာတောင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီးဆက်မရေးပဲ တန်းလန်းရပ်ထားတာ။ ပြောရရင်တော့ အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာပေါ့လေ။ ဩော်..ပြန်တွေးကြည့်ရင် ၁၀ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုက ကျွန်တော့်ကို အများကြီးပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်။ နိမ့်တခါမြင့်တလှည့် ဘဝဟာ ဖြစ်ချင်တာတွေ အကုန် မဖြစ်သေးပေမယ့် ကြိုးစားခွင့်ရခဲ့သလောက် အရာထင်ခဲ့သော ကျွန်တော့်ဘဝမှတ်တိုင်လေးတွေကိုလည်း ပြန်တွေးရင်လည်း ကျေနပ်ပါတယ်။”
“.ဒီနိုင်ငံမှာနေရတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကော မြန်မာပြည်ပြန်လာတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်လေးတွေ ရံဖန်ရံခါလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝကော ဘဝ နှစ်ခုကို တပြိုင်ထဲ နေခွင့်ရတဲ့ ဘဝမှာနေရတာလဲ ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီမှာနေရတာ သူများတွေထင်သလို အရာရာ ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပေမယ့် တချို့ ကျွန်တော်ချမပြထားသော ပရိတ်သတ်မသိသေးသော အရာတွေလဲ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်က လျှို့ဝှက်တတ်တယ်လေ။ တစ်ချိန်ကျရင် တော့ ကျွန်တော့်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အကောင်းအဆိုးနဲ့ အရာရာအားလုံးကို စာအုပ်အဖြစ်အသက်သွင်းပါဦးမယ်.. Cheers to 10 years of living in the United States” ဆိုပြီး အမှတ်တရတွေ ပြောပြလာပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ သူလက်ရှိ ခံယူထားတဲ့ သူ့ဘဝကို ကျေနပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဥက္ကာမင်းမောင်တစ်ယောက် ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ များစွာ ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမရေိကနျမှာ LGBT ဖွဈရတာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှု ပိုရှိတယျဆိုတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျ
Mister တဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာတဲ့ မငျးသားခြော ဥက်ကာမငျးမောငျက LGBT တဈယောကျဖွဈတယျလို့ ပရိသတျတှကေို အသိပေးထားသူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဥက်ကာမငျးမောငျက လကျရှိမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံ Arizona ပွညျနယျ၊ Phoenix မွို့မှာ အခွခြေ နထေိုငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီနကေ့တော့ ဥက်ကာမငျးမောငျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ အခွခြေ နထေိုငျခဲ့တာ (၁၀) နှဈတိတိ ပွညျ့တဲ့နလေ့ေး ဖွဈပါတယျ။ ဥက်ကာမငျးမောငျက အမရေိကားမှာ နထေိုငျခဲ့တဲ့ (၁၀) နှဈတာ အမှတျတရတှကေို အခုလို့ပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“Today is the 10 year mark in the US. အမရေိကနျပွညျထောငျစုကိုရောကျလာတာ ဒီနဆေို့ ၁၀နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီ။ ကြှနျတေျာ့ဘဝရဲ့ ၃ ပုံတပုံနီးပါးလို့တောငျပွောလို့ရမယျ။ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးပေါငျးမြားစှာ၊ ဘဝရဲ့ အခကျအခဲတှေ ပြျောစရာ အမှတျတရတှေ၊ နိုငျငံပေါငျးစုံက မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ၊ ဘဝအတှအေ့ကွုံ အနိမျ့အမွငျ့ အတကျအကတြှေ မြားစှာကွုံခဲ့ရပွီးပွီ။”
“ငယျငယျတုနျးက ကွီးလာရငျ ဒီနိုငျငံဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဒုတိယအိမျဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ တခါမှ မတှေးမိခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီကိုလာဖို့ ပညာတှသေငျဖို့ အစစအရာရာ ထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မကွေီးနဲ့ ဖကွေီးတို့ရဲ့ကြေးဇူးတှကွေောငျ့သာ ဘဝဟာ အရာရာ တဆဈခြိုးပွောငျးလဲသှားခဲ့တာ။ ကြှနျတျောငယျငယျက နဲနဲမောကျမာတယျ။ ဆိုးတယျ။ အလိုလိုကျခံရတော့ တခါတရံရိုငျးတယျ။”
“ဒီရောကျတော့မှ ဘဝဟာ အောကျခွသေိမျးကအစလုပျခဲ့ရတော့ အပိုးကြိုးသှားတယျ။ ဆငျးရဲခမျြးသာမခှဲပဲ လူတနျးစားပေါငျးစုံ လူမြိူးပေါငျးစုံကို တနျးတူညီတူ ဆကျဆံတတျလာတယျ။ အလုပျပေါငျးစုံလုပျခဲ့ဖူးသလို လူပေါငျးစုံနဲ့ ပေါငျးသငျးတတျလာတယျ။ ခှဲခွားဆကျဆံတာမြိုးမရှိတော့ဘူး။ မရိုငျးတတျတော့ဘူး။ ပိုကျဆံတနျဖိုးပိုသိလာတယျ။”
“လိငျတူခွငျးစုံမကျတာဟာလဲ ရှကျစရာမဟုတျတာ။ အမှားတခုကြူးလှနျတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ ပိုနားလညျလာတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာ LGBT တဈယောကျဖွဈခွငျးဟာ သာမာနျပါပဲ။ သူတို့အတှကျ ရပျတညျပေးသော တရားဥပဒတှေလေညျး ရှိတဲ့အတှကျ ပိုပွီး အမွငျကယျြလာတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလဲ ယုံကွညျမှူပိုရှိလာတယျ။ မွနျမာပွညျမှာနတေုနျးကတော့ အရမျးကွီးဖုနျးကှယျမထားခဲ့ပမေယျ့ အသိခံရမှာတော့ စိုးရိမျခဲ့တယျလေ။”
“ဒီမှာနတေဲ့ ၁၀ နှဈအတှငျး ရညျးစားတှလေဲ အမြားကွီးရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ဟဲဟဲ.. ဒါကတော့ခွှငျးခကျြပေါ့နျော။ အိမျထောငျကတြယျ။ သူဆုံးသှားတယျ။ မုဆိုးဖိုဖွဈဖို့ကံဇာတာပါလာတယျ။ အတိတျကို ပွနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျရငျ ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ တကယျဖွဈခဲ့တာတှဟော ရုပျရှငျတကားထကျပိုပွီးရှူပျထှေးလေးနကျတယျ။”
“အဲ့အကွောငျးတှကေို မခှနျးဆငျ့က ရုပျရှငျရိုကျမယျဆိုလို့ ရေးနတောတောငျ စိတျဓာတျကပြွီးဆကျမရေးပဲ တနျးလနျးရပျထားတာ။ ပွောရရငျတော့ အကွောငျးတရားပေါငျးမြားစှာပေါ့လေ။ ဩျော..ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ ၁၀ နှဈဆိုတဲ့ အခြိနျကာလတဈခုက ကြှနျတေျာ့ကို အမြားကွီးပွောငျးလဲသှားစခေဲ့တယျ။ နိမျ့တခါမွငျ့တလှညျ့ ဘဝဟာ ဖွဈခငျြတာတှေ အကုနျ မဖွဈသေးပမေယျ့ ကွိုးစားခှငျ့ရခဲ့သလောကျ အရာထငျခဲ့သော ကြှနျတေျာ့ဘဝမှတျတိုငျလေးတှကေိုလညျး ပွနျတှေးရငျလညျး ကနြေပျပါတယျ။”
“.ဒီနိုငျငံမှာနရေတဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့ဘဝကော မွနျမာပွညျပွနျလာတိုငျး ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပျလေးတှေ ရံဖနျရံခါလုပျခှငျ့ရတဲ့ဘဝကော ဘဝ နှဈခုကို တပွိုငျထဲ နခှေငျ့ရတဲ့ ဘဝမှာနရေတာလဲ ကြှနျတျော ကနြေပျပါတယျ။ ဒီမှာနရေတာ သူမြားတှထေငျသလို အရာရာ ပွီးပွညျ့စုံနတေယျဆိုတာ မဟုတျပမေယျ့ တခြို့ ကြှနျတျောခမြပွထားသော ပရိတျသတျမသိသေးသော အရာတှလေဲ အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ ကြှနျတျောက လြှို့ဝှကျတတျတယျလေ။ တဈခြိနျကရြငျ တော့ ကြှနျတေျာ့ဘဝဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အကောငျးအဆိုးနဲ့ အရာရာအားလုံးကို စာအုပျအဖွဈအသကျသှငျးပါဦးမယျ.. Cheers to 10 years of living in the United States” ဆိုပွီး အမှတျတရတှေ ပွောပွလာပါတယျ။
ဥက်ကာမငျးမောငျကတော့ သူလကျရှိ ခံယူထားတဲ့ သူ့ဘဝကို ကနြေပျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဥက်ကာမငျးမောငျတဈယောကျ ဒီထကျမက အောငျမွငျမှုတှေ၊ ပြျောရှငျမှုတှေ မြားစှာ ရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Previous Previous post: ချိန်ထမီလေးဝတ်ပြီး နန်းဆန်ဆန် Catwalk လျှောက်ပြခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon Loresca
Next Next post: သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြတော့မယ့် ငွေဇင်လှိုင်း